Kubatanidzwa kutsva kweVimeo uye Zvishandiso Zvekubatanidza Zvinosimbisa Izvo Seyakajairwa Vatepi Vanyori | Martech Zone
Kubatanidzwa kutsva kweVimeo uye Maturusi Ekubatanidza Simbisa Icho Sechiyero cheVhidhiyo mafirimu
Svondo, Kukadzi 26, 2017 NeChishanu, Gunyana 29, 2017 Douglas Karr
Imwe yemakambani edu akavakidzana muchivako studio yedu iri mune mamwe ma cinema evatambi, Dzidzisa 918. Ivo vane hunyanzvi mukuunza magear avo chero kupi pasi uye nekugadzira epic mavhidhiyo. Haisi chete mhando yebasa ravanogadzira iyo inoshamisa, zvakadaro. Ivo vanopedza yakawanda yenguva yavo vachinyatso kuvandudza iyo rondedzero, vachichichinja kuita zviitiko, ipapo kuronga mapurojekiti avo zvisina tsarukano. Mhedzisiro yacho inokatyamadza… heano mamwe masampula kuburikidza neKambani Reel yavo:
Ndakasangana nemumwe wevaivamba uye ndanga ndichitaura naye nezve maturusi api avanoshandisa kuti vadyidzani vashande kana vatengi vadzokorore basa ravo Joshua akataura izvozvo Vimeo vakanga vachangobva kuwedzera zvishandiso zvavo, vachivapa zvese zvavaida. Yekutanga yaive mavhidhiyo ekuongorora mapeji ayo anoita kuti vaongorori vatore nguva pamwe nemanotsi uye vataurirane nekudzoka pairi. Yechipiri yaive yekubatanidza yakanangana neAdobe Premiere Pro iyo inogonesa yakananga kurodha kuVimeo.
Vimeo Vhidhiyo Yekuongorora Mapeji
Wongorora uye Kubatana manotsi - Vaongorori vanogona kudzvanya zvakananga pane chero furemu kuti vasiye kodhi-yakanyorwa kodhi. Kana iwe ukabaya katsamba, iwe unobva wasvetukira kurudyi furemu.
Goverana neVasingagumi Vaongorori - Chengetesa kutumira zvakavanzika peji rekubatanidza peji kune chero munhu - kunyangwe kana vasiri paVimeo.
Tarisa kufambira mberi kwako - Pindura munguva chaiyo, kana shandura manotsi kuti uite-zvinyorwa kuti uvandudze vhidhiyo yako ive nyore kupfuura nakare kose.
Vimeo Panel yeAdobe Premiere Pro
The Vimeo Paneli ye Adobe Premiere Pro inobvumira vhidhiyo yekugadzira vhidhiyo kurerutsa yavo yekugadzirisa kufamba mafambiro nekupa nzira yekuisa nyore vhidhiyo yavo zvakananga kubva kune software. Vimeo PRO kana Nhengo dzeBhizinesi dzinogona kugadzira mapeji ekuongorora kubva panhare yemahara. Zvimiro zvinosanganisira:
Isa Mavhidhiyo Pakarepo - Tumira mavhidhiyo ako zvakananga kune yako Vimeo account, sarudza ako wega magadzirirwo paunenge uchiisa, kuendesa yako yega tsika encoding presets, uye nezvimwe.
Sevha Nguva Yekugadzira - Tarisa pane rako basa uye kurerutsa kufamba kwako nekukanda mavhidhiyo uye nekugadzira mapeji ekuongorora pasina kusiya Premiere Pro.
Dhawunirodha iyo Vimeo Panel yeAdobe Premiere Pro
Kuzivisa: Martech ndeye Yakabvumirwa Adobe Inobatana uye Vimeo zvakabatana. Tiri kushandisa edu akabatana zvinongedzo muchinyorwa chino.
Tags: kupiswaadobe premiere proKushambadzira Vhidhiyokuratidzwa provhidhiyo kubatanavideo reviewVimeovimeo mapeji ekuongorora
PaveAI: Mumwe Munhu Akazopedzisira Awana Mhinduro muGoogle Analytics!
Kukadzi 27, 2017 na4:28 PM
Hei Doug, ndakaedza kugovera ruzivo urwu muboka revatengesi vemafirimu paFacebook, asi rinopinda sevhidhiyo. Zvakaipisisa, hazvitambe paunodzvanya pairi. Chinyorwa pachacho hachizobatana kana kuratidza.
Kukadzi 27, 2017 na6:42 PM
Facebook haina kutamba zvakanaka nemunhu wese!
Gumiguru 25, 2021 pa 8:52 AM
Ini handina kukwanisa kutaura kubva kuchinyorwa chako uye handisi kuwana chero chekusimbisa kana kuramba pane Vimeo saiti, asi unoziva here kana zvichikwanisika kubvumidza wechitatu bato kugona kupa imwe mhando yechimiro chekuisa mavhidhiyo kuakaundi yako yeVimeo pane kukwidzwa nemuridzi weakaundi?
Ini ndinofungidzira yakaipisisa mamiriro aunogona kushandisa faira rekufambisa sevhisi seWeTransfer kuti utore vhidhiyo faira wobva waisa wega kuVimeo account kuti utange kushanda kwekubatana.
Gumiguru 25, 2021 na2: 48 PM
Zvinogoneka - Vimeo ane upload API. Vanewo a chishandiso chekubatana inogona kushandiswa usati waburitsa vhidhiyo yekugovera uye kuunganidza mhinduro pairi.